Kurwira kodzero dzeNginx kunoenderera uye Rambler akaenderera mberi nematare muUSA | Kubva kuLinux
Gore rakapera tinogovana pano pane blog Nhau mbiri pamusoro pematare akaitwa naRambler paNginx umo makwikwi emhosva akatangwa vachipokana nevaimbove vashandi veRambler vakagadzira Nginx pasi peChikamu 3 chehunyanzvi. 146 yePenal Code ("kutyorwa kwekodzero uye kodzero dzakabatana").
Mhosva yacho yaive yakavakirwa pakutaurwa kuti kuvandudzwa kwaNginx kwakaitika panguva yekushanda yevashandi naRambler uye pachinzvimbo chehutungamiriri hweiyi kambani.
Panguva yekuvandudzwa kweinx, Igor Sysoev akashanda kuRambler semutungamiriri wehurongwa, kwete mugadziri uye aishanda purojekiti yake sechido chekuita, uye kwete sekuratidzwa nevakuru vake.
Sekureva kwaIgor Ashmanov, uyo panguva iyoyo aive mumwe wevatungamiriri vaRambler, nekuhaya Sysoev, zvakanyatso bvumidzwa mukana wekutora chikamu muchirongwa chako. Zvakare, iyo system manejimendi mabasa aisanganisira kusimudzira software.
Rambler anoti chibvumirano chebasa chakatemwa kuti mushandirwi achengetedze kodzero dzese yezviitiko zvinoitwa nevashandi vekambani. Chisarudzo chakaiswa nevamiriri vemitemo chakaratidza kuti nginx inzvimbo yehungwaru yaRambler, iyo yakapihwa zvisiri pamutemo sechinhu chemahara, pasina ruzivo rwaRambler uye sechikamu chematsotsi.
Gare gare mushure mekuita kubvuta pamahofisi eNinx, misa vashandi uye neyakaguma maitiro. Zvese maitiro aya akashoropodzwa zvakanyanya muRussia nemirairo yakati wandei yepamusoro, kusanganisira mukuru wevashandi anoti mushure memakore gumi nemashanuiwo mutemo weganhuriro yapera kufaira chichemo chekutyora kodzero.
Kusvika nguva iyoyo zvaiita sekunge kuedza kwese neRambler Boka rekutora kodzero dzehungwaru dzaNginx yakanga yasvika kumagumo, sezvo mukuwedzera vatungamiriri vakati wandei veRambler vafunga kuputsa hukama nekambani yemagweta yeLynwood Investments, kubvisa chikumbiro kumasangano anomiririra mutemo uye kukumbira kumiswa kwenyaya yematsotsi inopesana nevashandi veNGINX.
Y ikozvino mwedzi mitanhatu gare gare zvinhu zvinouya kuhupenyu Seye femu yemutemo Lynwood Investments, haichazoyedza kuita izvi mumasangano ekuremekedza mutemo eRussia Federation, achimiririra Rambler Group.
Asi zvino vakamhan'ara kumatare eUnited States vachipesana neF5 Networks zvine chekuita nekutaura kwaNginx kwekodzero dzakasarudzika. Mhosva yacho yakaendeswa kuSan Francisco muUnited States Dare reNorth California.
Igor Sysoev naMaxim Konovalov, pamwe nemari yekudyara yeRuna Capital uye E. Ventures, zvinosanganisirwa mune runyorwa rwevatsigiri mudare redzimhosva. LHuwandu hwekukuvara hunofungidzirwa pamamiriyoni mazana manomwe nemakumi manomwe emadhora (Nokuenzanisa, Nginx yakatengeswa kuF5 Networks ne $ 650 miriyoni.) Chiyero chinokanganisa zvese NGINX server uye yekutengesa software NGINX Plus yakavakirwa pairi.
F5 Networks inofunga kuti zvirevo zvemupomeri hazvina hwaro, kusanganisira iyo inongedzera kuchisarudzo chehofisi yemuchuchisi weRussia, iyo yakapedza kuferefeta ndisina kuwana humbowo hwemhosva kubva kune vakabatana veNginx.
F5 Networks magweta ane chokwadi chekuti pomero dzevatsigiri mudare rinotungamirwa neUS hadzina hwaro.
Sezvineiwo, muna Kubvumbi iro Rambler Boka rakazivisa kumiswa kwechibvumirano neLynwood Investments uye kurambidzwa kuita bhizinesi pachinzvimbo cheRambler Group.
Panguva imwecheteyo, Lynwood Investments yakachengetedza kodzero yekuratidza kurasikirwa mune iyo NGINX kesi uye kutora muripo muzita ravo uye nekubatsira kwavo.
Chinyorwa cheChirungu chinoburitsa pachena zvimwe pasi pekuti Lynwood nevamwe vayo vaive nechikamu chakakura cheRambler neRambler vakatamisa humiriri hweININX kuLynwood. Kuendeswa kwekodzero kwakatenderwa neRambler Board of Directors.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Kurwira kodzero dzeNginx kunoenderera uye Rambler akaenderera mberi nematare muUSA
Damn ... Asi kupenga kwakadii uku! Amai Vamwari…